वडा अध्यक्ष तामाङले दिए हजार किशाेरीलाई सेनिटरी प्याड ! – www.visionfm.org
वडा अध्यक्ष तामाङले दिए हजार किशाेरीलाई सेनिटरी प्याड !
रजश्वलाले विद्यालय आउन नराेक्ने अपेक्षा
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०७, २०७६ समय: १:४७:४९
ओखलढुंगा- महिनावारी भएको समयमा विद्यालय नआउने छात्रालाई मध्येनजर गर्दै ओखलढुंगाको मूलखर्क स्थित चौतारा माध्यमिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष गोविन्दराम तामाङले चौतारा माविका छात्रालाई १ हजार थान प्याड वितरण गरेका हुन् ।
महिनामा ५ दिन रजश्वला भएको समयमा विद्यालय नआउने छात्राहरुलाई विद्यालयमै प्याडको व्यवस्था गरेर नियमित विद्यालय आउने वातावरण बनाउन प्याड हस्तान्तरण गरेको वडा अध्यक्ष तामाङले बताए । सेनिटरी प्याडले छात्राको स्वास्थ्य अवस्था सुरक्षित र अध्ययनमा सहज हुने उनको भनाई छ । ‘रजश्वला भएको समयमा महिनामा ५ दिन विद्यालय छाड्नुपर्ने छात्राहरुको दुखद् परिस्थितीको अन्य हुने र नियमित विद्यालय आएर पढ्न उनिहरुलाई सहज हुने अपेक्षा छ ।’ तामाङले भने,‘छात्राहरुले लजाएर, अफ्ठ्यारो मानेर बस्ने समय होईन, विद्यालयमै रहेका बेला रजश्वला भए वा घरैमा भएपनि विद्यालय आउने प्याड मागेर प्रयोग गर्ने र निर्धक्क पढेर घरजाने गर्नुपर्छ ।’ सेनिटरी प्याड विद्यालयमा अभाव हुन नदिने वडा अध्यक्ष तामाङले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
वडाले उपलब्ध गराएको प्याड माथिल्लो कक्षाका छात्रा र शिक्षीकाको व्यवस्थापनमा रहने छ । आवश्यक परेको खण्डमा छात्राहरुले मागेर प्रयोग गर्न सक्ने विद्यालयका प्रअ कमल कट्वालले बताए । ‘महिनावारी भएकै कारण छात्राहरु स्कुल आउन नसक्ने अवस्था थियो । वडाले प्याड उपलब्ध गराएको छ अब केही सहज होला कि भन्ने आशा छ ।’ प्रअ कट्वालले भने । एक कार्यक्रमका बिच महिनावारी हुँदा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा समेत विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराईएको छ । विद्यालयमा उपलब्ध गराईएको प्याडले सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख विवेक तामाङले पढाईमा सहयोग पुग्ने बताए । पाठ्यक्रममा रजस्वला हुँदा अपनाउनुपर्ने उपायबारे सचेतना जगाउने खालको विषयवस्तु भएको अवस्थामा विद्यालयमै भएको सेनेटरी प्याडको व्यवस्थाले छात्रालाई अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण बनेको प्रमुख तामाङको भनाई छ ।
विद्यालयमै प्याडको व्यवस्था भएपछि चौतारा माविका विद्यार्थी छात्राहरु खुसी भएका छन् । प्याड नहुने र शौचालय व्यवस्थित नहुँदा झन समस्या हुने भन्दै छात्राहरु रजश्वला हुँदा विद्यालय नगई घरैमा बस्ने गरेका थिए ।